एजेन्सी। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको विधानसभाले स्टेल्थिङ (अर्थात् सेक्सका बेला आफ्ना साथीलाई जानकारी नदिई वा सहमति बिना कण्डम हटाउनु) माथि प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ।​ डेमोक्रेट सदस्य क्रिस्टिना गार्सिया पछिल्लो चार वर्षदेखि यो कानूका लागि प्रयास गरिरहेकी थिइन्। विधानसभामा यो विधेयक पेश गर्ने गार्सियाले भनिन्, ‘अब क्यालिफोर्नियामा यस्तो गर्नु अपराध हो भनेर स्पष्ट भइसकेको छ।’
गार्सियाले भनिन्, ‘यस्तो खालको यो देशको पहिलो कानून हो। म अन्य राज्यलाई पनि क्यालिफोर्नियाको बाटोमा हिँड्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै, स्टेल्थिङ अनैतिक मात्रै नभई अवैधसमेत भएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु।’​ स्टेल्थिङको कानून बनाउनका लागि क्रिस्टीना गार्सिया सन् २०१७ देखि काम गरिरहेकी छिन्। त्यतिबेला विद्यार्थी रहेकी एलेक्जेन्ड्रा ब्रोडस्कीको एउटा रिपोर्ट ‘कोलम्बिया जर्नल अफ जेन्डर एन्ड ल’ मा प्रकाशित भएको थियो। यो कानूनका लागि जागरूकता फैलाउने श्रेय यही रिपोर्टलाई नै दिइन्छ। यद्यपि, स्टेल्थिङ कुनै नौलो कुरा भने होइन।
आखिर के हो ?
सिधा शब्दमा भन्ने हो भने, स्टेल्थिङको अर्थ सेक्सका बेला साथीलाई नबताइकनै कण्डम हटाउनु वा उनलाई जानीजानी हानी पुर्‍याउनु हो। यस्तो गर्दा साथीलाई यौन सञ्चारित रोगद्वारा संक्रमित हुने वा गर्भवती हुने खतरा पैदा हुन्छ। साथै यो पीडितको गरिमाको पनि उल्लंघन हो। यद्यपि, यो वर्षौंदेखि हुँदै आएको अनुमान गरिन्छ। तर इन्टरनेटमा अत्यधिक लोकप्रिय भएपछि नै यसबारे बढी ध्यान दिइएको हो। वास्तवमा इन्टरनेटमा थुप्रै ब्लगमा सेक्स अपराधीले स्टेल्थिङ कसरी गर्ने भन्ने बारे जानकारी दिइरहेको पाउन सकिन्छ।
नेशनल लाइब्रेरी अफ मेडिसीनमा सन् २०१९ मा प्रकाशित एक पर्चामा २१ देखि ३० वर्षका १२ प्रतिशत महिलाले स्टेल्थिङको आफ्नो अनुभव साझा गरे। त्यसै वर्ष अष्ट्रेलियाको मोनाश विश्वविद्यालयका शोधकर्ताले पुरुषसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने बेला ३३ प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत पुरुषसँग स्टेल्थिङको घटना भयो। सन् २०१९ को अर्को एउटा अनुसन्धानमा लगभग १० प्रतिशत पुरुषले सेक्सका बेला साथीको सहमति बिना कण्डम हटाएका थिए।
ब्रोडस्कीले सन् २०१७ मा प्रकाशित एउटा पर्चामा स्टेल्थिङमाथि लेख्ने एक चर्चित ब्लगरलाई उद्धृत गरेकी थिइन्। यी ब्लगर अब निष्क्रिय भइसकेको आफ्नो साइटमा अन्य पुरुषलाई साथीलाई थाहा नहुने गरी कण्डमलाई कसरी चुपचाप हटाउने भन्ने सल्लाह दिन्थे। ब्लगमा कमेन्ट गर्नेहरूले विभिन्न प्रकारको अभद्र टिप्पणी गरेका थिए।
जुन देशले स्टेल्थिङसँग जुध्ने कोसिस गरे उनीहरूले यसका लागि विभिन्न प्रकारका तरिका अपनाएका छन्। क्यालिफोर्नियाको यो कानून अमेरिकामा यस्तो खालको पहिलो कानून हो जसले स्टेल्थिङलाई वास्तवमा अपराध मान्दैन। यसको साटो स्टेल्थिङका लागि यो कानूनमा सामान्य दण्डको प्रावधान छ। यसमा पीडित वा पीडितलाई जरिवानाका लागि मुद्दा दर्ता गर्नका लागि अनुमति दिइन्छ।
संसारभरि यसका लागि यौन हमलादेखि बलात्कारसम्मका मुद्दा दर्ता भएपछि केही सीमित मामिलामा मात्रै मुद्दा सफल हुने गर्छन्। जर्मनीका एक प्रशरी अधिकारीलाई आफ्नो साथीको सहमति बिना कण्डम निकाल्नका लागि यौन उत्पीडनको दोषी ठहराइएको थियो। अदालतले उनलाई आठ महिनाको निलम्बित जेलको सजाय दिएको थियो। साथै पीडितको यौन स्वास्थ्यको परीक्षणका लागि ९६ यूरो र जरिवानाको रूपमा ३,००० यूरोको जरिवाना पनि लगाइएको थियो।
न्यूजिल्याण्डमा यसका लागि कठोर नीति अख्तियार गरिएको छ। यस वर्षको सुरुमा एक व्यक्तिलाई कुनै यौनकर्मीसँग स्टेल्थिङ गरेका कारण बलात्कारको दोषी ठहर गरियो। यसका लागि उनलाई तीन वर्ष ९ महिनाको जेल सजाय सुनाइयो।
यसै गरी बेलायतमा पनि स्टेल्थिङलाई बलात्कार मानिन्छ। यद्यपि, यसका लागि कुनै विशेष कानून छैन। सन् २०१९ मा एक व्यक्तिलाई यौनकर्मीसँग स्टेल्थिङ गरेका कारण बलात्कारको दोषी ठहर गरियो। अभियुक्तसँग यौनकर्मीले कण्डम लगाउन विशेष रूपमा आग्रह गरेकी थिइन्। अदालतले अभियुक्तले कण्डम हटाएका कारण यौनकर्मीसँगको सशर्त सहमतिलाई अस्वीकार गर्दै बनाइएको सम्बन्धलाई बलात्कार ठहर गर्‍यो।
सन् २०१४ मा क्यानडा त सन् २०१७ मा स्विटजरल्याण्डमा यसका कारण यौन उत्पीडनको सफल मुद्दा चलाइयो। यद्यपि, हालै ज्यूरिखको केन्टोनल सुप्रिम कोर्टले अफसोससहित स्टेल्थिङलाई अवैध मानेन। स्टेल्थिङको सबैभन्दा हाई प्रोफाइल मामिलामध्ये एक जुलियन असांजको रह्यो। उनीमाथि सन् २०१० मा स्वीडेनको यात्राका बेला दुई महिलाले यौन सम्बन्ध स्थापित गर्दा कण्डम हटाएको आरोप लगाएका थिए।
यद्यपि, उनलाई कुनै पनि अपराधको दोषी ठहर गरिएन किनभने अमेरिकालाई सुम्पिने डरले उनले स्वीडेन जान अस्वीकार गरेका थिए। अमेरिकामा उनीमाथि जासुसीको मुद्दा दर्ता गरेका थिए । पछि स्वीडेनले यो मामिलालाई हटाइदियो।
संसारमा स्टेल्थिङसँग जुध्ने तरिकामा निकै असमानता छन्। यो कुरालाई मिशेला कोएलद्वारा निर्मित र अभिनीत बीबीसीको लोकप्रिय मिनी सिरिज ‘आई मे डिस्ट्रोय यू’ मा देखाइयो। यसको पाँचौं एपिसोडमा नायिका अराबेला, स्टेल्थिङ गर्ने एक व्यक्तिलाई बेलायतको कानूनअन्तर्गत बलात्कारी बताउँछ। त्यसपछि उनले यसलाई अमेरिका र अष्ट्रेलियासँग दाँजेर भन्छिन्, ‘यदि तपाईं अमेरिकामा हुनुहुन्छ भने यसलाई ‘बलात्कार जस्तै-जस्तै’ मानिन्छ। यस्तै अष्ट्रेलियामा यसलाई ‘थोरै बलात्कार’ बताइन्छ।’
स्टेल्थिङ सहमतिको कुरा हो र कसैमाथि मुद्दा चलाउनका लागि देशको कानूनलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेछ। एमनेस्टी इन्टरनेशनलले यूरोपको बलात्कार कानूनको समीक्षामा ३१ मध्ये १२ देशमा ‘सहमति’ को कानून भएको पाए। अन्य देशमा अन्य कारणसहित यसलाई बलात्कार मानिन्थ्यो जस्तै कि – के सेक्सका बेला हिंसा गरिएको थियो ?
नेदरल्याण्ड, फिनल्याण्ड, स्विजरल्याण्ड र स्लोवेनियासहित थुप्रै देश आफ्नो कानून फेर्नेबारे सोचिरहेका छन्। यस्तै, स्पेनले पछिल्लो वर्ष यौन हिंसाका लागि एउटा विधेयक ल्याउने घोषणा गरेको थियो र यसमा बलात्कारको कानूनी परिभाषा फेरिने बताइएको थियो। क्यालिफोर्नियाजस्तै अष्ट्रेलियाको राजधानी क्षेत्र (एसीटी) ले पनि पछिल्ला दिन स्टेल्थिङलाई गैरकानूनी घोषित गरेको थियो। यस्तो गर्ने त्यो अष्ट्रेलियाको पहिलो राज्य हो। हालका कानूनमा यो गतिविधि पहिला नै दर्ता थियो । तर नयाँ कानूनअन्तर्गत अब यसलाई यौन हमला मानिनेछ।
यो विधेयकलाई विपक्षका नेता एलिजाबेथ लीले पेश गरेकी थिइन्। उनले भनिन्, ‘स्टेल्थिङ कुनै पनि व्यक्तिका लागि एक भयानक कुरा हो। मलाई गर्व छ कि एसीटीले यसलाई जघन्य कामलाई अपराध ठहर गर्दै यो कानून पारित गरेर देशलाई अघि बढाउने काम गरेको छ।’ -बीबीसी
आइन्स्टाइनको एक दुर्लभ हस्तलिपी : ३० लाख युरोमा लिलामी हुँदै
जसले ‘फ्रि लभ’ नारा प्रवर्द्धन गर्न ९ जनासँग विवाह गरे
जब तालिबान कमाण्डरसँग यौन सम्बन्ध राख्न अस्वीकार गरिन्…